राष्ट्रप्रेमी नेपाली र विश्वको नजरमा महरा गिरेका छैनन्, नेपालली राजनीतिक चरित्र र स्तर खस्किएको हो - Himali Patrika
राष्ट्रप्रेमी नेपाली र विश्वको नजरमा महरा गिरेका छैनन्, नेपालली राजनीतिक चरित्र र स्तर खस्किएको हो
हिमाली पत्रिका १८ माघ २०७६, 12:51 pm
काठमाडौं। मलाई थाहा छ, सत्य टिक्दैन आजकाल हाम्रो समाजमा। तरपनी मैले देखेको सत्य बोल्न या लेख्न पटक्कै डराउँदिन।
स्वस्थ अनि रूपान्तरित समाज चाहने राष्ट्रप्रेमी नेपाली र विश्वले नेपालको राजनीतिक इतिहासका चिन्तन र व्यवहारहरूसँग अत्यन्त जानकार छन्।
महरामाथि खेलिएका दूषित खेलले राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूका साथै नेपाललाई माया गर्ने र नेपालको राजनीतिप्रति चासो राख्ने विश्व समुदायको नजरमा महराको नैतिकता र चरित्र खस्केको नभै नेपालको राजनीतिक चरित्र र स्तर खस्किएको हो।
स्वार्थका चस्मा नलगाएका आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् महरालाई अमानवीय तरीकाले फसाइएको हो। एक्काइसौँ शताब्दीको चरम विकाशको अनुभूति आफ्ना जनतालाई गराउने विकसित राष्ट्रका राजनीतिज्ञहरूले पनि स्पष्ट बुझिसकेका छन्।
नेपालको राजनीतिलाई छामेर बुझेका छन्। सबैभन्दा नेपालको प्रकृति बुझेका छन्। घुम्टो ओढेर सिंगारिएकी हिमालको सेता दन्ते लहर देखाउँदै मुसुक्क हासेकी अत्यन्त सुन्दर अप्सरा जस्ती दुलहीको रूपमा देखिने नेपाललाई कुरूप पार्ने तत्त्व के के हो ? सबैले बुझेका छन्। विश्व सपनाको नगरी हो नेपाल। त्यसैले त सबैले चासो राख्दछन्।
जनताको घर दैलोमा महरा। पुर्वसभामुख महरा काठमाडौँबाट दाङ्ग जाँदा प्राय मतदाताको घरमा पुगीरहने एक मात्र त्यस्ता नेता थिए।
सवाल गर्छन्, धेरैले महरा मेरो को हुन ? महरा मेरो बुवा, काका, आफन्त कोही हैनन्। मानव हुन्। एक पुरुष हुन्। मेरो बुवा पनि एक पुरुष थिए। सानो बाबु छ त्यो पनि पुरुष हो। प्रेमी हुनुहुन्छ। अत्यन्त प्रेम गर्छु उहाँ पनि पुरुष नै हो।
भगवान् शिव पनि पुरुष नै हुन्। जो मेरो इस्ट देवता हुन्। त्यसैले पुरुषलाई घृणा गर्दिन। दुष्ट आत्माहरू पुरुष या महिला दुवै हुन्छन्। समाजमा दुष्टतालाई घृणा गर्ने हो।
महराको अनुहारमा मेरो बुवा देख्दछु। सायद मैले मेरो ड्याडी गुमाएर होला ! मेरो बुवाको उमेरको सबै बुवाहरूमा मेरो बुवाको प्रतिबिम्ब देख्द छुँ। यति हदसम्म च रि त्र ह त्या त दानवले मात्र गर्न सक्छ।
मानवीय स्वभाव भएको मनले कदापि गर्न सक्दैन। त्यसैले राष्ट्रियता अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी तथा सकारात्मक समाजका मनिसहरुका माझ महरा गिरेका छैनन् र कदापि गिर्ने छैनन्।